Denizli နှင်းလျှောစီးစင်တာသည်နှင်းလျှောစီးအားကစားကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာခဲ့သည် RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ20 DenizliDenizli နှင်းလျှောစီးဌာနသည်နှင်းလျှောစီးအားစိတ်ဝင်စားမှုကိုတိုးပွားစေသည်
16 / 02 / 2020 20 Denizli, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, တူရကီ, TELPHER
Denizli Metropolitan Municipality မှတည်ထောင်ခဲ့သော Denizli နှင်းလျှောစီးစင်တာသည်မြို့၏ဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုအသံပြုရန်အတွက်နှင်းလျှောစီးအားကစားကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ဒီနှစ်လိုင်စင်ရအားကစားသမား ၂၅ ယောက်နှင့်အတူနှင်းလျှောစီးအသင်းတစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့သော Denizli Metropolitan Municipality သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်လူ ၄၀၀ ကိုအခမဲ့နှင်းလျှောစီးသင်တန်းများပေးခဲ့သည်။
Denizli မြို့တော်စည်ပင်သာယာမှအကောင်အထည်ဖော်သည့်အရေးအကြီးဆုံးစီမံကိန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့် Denizli နှင်းလျှောစီးစင်တာသည်တစ်ဖက်တွင် visitors ည့်သည်အရေအတွက်နှင့်မှတ်တမ်းများကိုချိုးဖောက်နေပြီးနေ့စဉ်နှင်းလျှောစီးခြင်းကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာသည်။ Denizli ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအားကစားနှင်းအရည်အသွေးကိုနှင်းလျှောစီးစင်တာ, တူရကီရဲ့4များအတွက်အများဆုံးဦးစားပေးနေရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ပို. ပို. နှင်းလျှောစီး၏အားကစားမြှင့်တင်မယ့်နှင်းလျှောစီးအားဖြင့်အပျော်တမ်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားထံမှမိုးသည်းထန်စွာဖြစ်ကြသည်။ မွို့၌နှင်းလျှောစီးရန်စိတ်ဝင်စားမှုများလာသည်နှင့်အမျှ Denizli Metropolitan မြူနီစီပယ်သည် 2016 မှစတင်၍ အခမဲ့နှင်းလျှောစီးသင်တန်းများကိုစတင်ခဲ့သည်။ ရာသီသစ်တွင် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်မှ စ၍ လူ ၄၀၀ အားနှင်းလျှောစီးသင်တန်းများပေးခဲ့သည်။ သင်တန်းများကိုတစ်ပတ်လျှင်သုံးရက်ပေးသော်လည်းစာသင်ချိန်အတွင်းကျောင်းသားများသည် ၁၅ ရက်သင်တန်းတက်နိုင်သည်။
နှင်းလျှောစီးအဖွဲ့ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်
Denizli Metropolitan Belediyespor နှင်းလျှောစီးအသင်းကို Denizli Metropolitan Municipality အခမဲ့သင်တန်းများတွင်ပါ ၀ င်သောလိုင်စင်ရအားကစားသမား ၂၅ ယောက်နှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတည်ထောင်ခဲ့သည်။ နေ့စဉ်အတွေ့အကြုံရရှိခဲ့သည့် Metropolitan Belediyespor နှင်းလျှောစီးအသင်းသည် ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်မှ ၇ ရက်အထိ Kayseri တွင်ကျင်းပသော Alpine စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ပြိုင်ပွဲများတွင်လိုင်စင်ရအားကစားသမား ၇ ယောက်နှင့်ပြိုင်ခဲ့သည်။
Denizli Metropolitan မြို့တော်ဝန် Osman Zolan ကအားကစားလုပ်ရန် Metropolitan မြူနီစီပယ်သည်အားကစားဌာနခွဲများတွင်အခမဲ့သင်တန်းများပေးခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဒင်းနစ်လီနှင်းလျှောစီးစင်တာနှင့်အတူမြို့တွင်းဆောင်းရာသီအားကစားများ၌နေ့စဉ်စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာကြောင်းနှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ ဤအခြေအနေတွင်အခမဲ့နှင်းလျှောစီးသင်တန်းများပေးခဲ့သည်ဟုသမ္မတအော့စမန်ဇန်လန်ကပြောကြားခဲ့သည်။ “ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီလမ်းကြောင်းများနှင့်အဆောက်အ ဦး များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ဒင်းနစ်လီနှင်းလျှောစီးစင်တာသည်အပျော်တမ်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်သည်။ skiers ကြိုဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စင်တာသည်ဆောင်းရာသီခရီးသွားခြင်း၏အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည့်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့တွင်နှင်းလျှောစီးစီးခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလည်းအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ ငါတို့ Deniz သည်ဆောင်းရာသီအားကစားများတွင်ချန်ပီယံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
မြို့ပြသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးဥပမာစီမံကိန်းများအတွက်အကျိုးစီးပွား Boost မှ Bursa
အဘယ်အရာကိုတိုကျတှနျးထားသ Ladik Akdag နှင်းလျှောစီး Center ကနှင်းလျှောစီးစိတ်အားထက်သန် '' ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး